Mandatsaka ny ankizivavy sy ny vehivavy, modeling, film, miasa
Modeling sy ny horonan-tsary fanariana
Modeling sy ny horonan-tsary fanariana pro začínající dívky a chlapce
Ny tanjontsika dia ny hihaona ankizivavy tsirairay. Isika ihany no miasa amin'ny ankizivavy izay manana ny maha no voamarina, fara fahakeliny, mampiasa ny kaonty Facebook amin'ny alalan'ny izay afaka mifandray anao mangingina. Miaraha antsika tanteraho ny nofy nofy!
Ny modely vaovao
Tovovavy rehetra manolotra ny mety hisian'ny fohy sy fiaraha-mientana ifampizarana mandritra ny fotoana maharitra amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa filming, sary sy ny maro hafa.
Miara-miasa amintsika tanteraka matihanina, tsy mamatotra sy mandany fotoana. Miezaka isika ny vaovao rehetra ny ankizivavy niakatra hitsena azy, ary indrindra indrindra tsy ho miady saina amin'ny fomba rehetra.
Sary sy ny filming dia foana ao ambany mpandray anjara, ny zazavavy tsy voatery ho raiki-tahotra sy ho menatra ny fiandohana.
Alefaso ny hafatra manokana
Hira, mozika, dihy
Izahay mitady tovovavy iray tsara tarehy
Ao anatin'ny fotoana fohy sy maharitra ny fiaraha-miasa
Fiaraha-miasa ao amin'ny Repoblika Tseky sy ny any ivelany
Mety tanteraka ny fiaraha-miasa tsy fantatra anarana